श्रीमतीले एक्लै छोडेर अमेरिका उडेपछि आ’क्रोसित मुद्रामा भेटिए भाइरल अघोर बाबा ! हेर्नुहोस् (भिडियो सहित) – SUDUR MEDIA
January 16, 2021 January 16, 2021 AdminLeaveaComment on श्रीमतीले एक्लै छोडेर अमेरिका उडेपछि आ’क्रोसित मुद्रामा भेटिए भाइरल अघोर बाबा ! हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)
एक जमाना सामाजिक संजालमा निक्कै भाइरल बनेका अघोर बाबाको हिजो आज त्यति चहलपहल देखिदैन । अघोरी बाबा र उनको अमेरिकन श्रीमतीको विबाहको बारेमा पनि सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो । उनको श्रीमतीले ठ’गि गरेको भनेर आएको समाचार पनि सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो । श्रीमती हि’रासत पुगेर अघोरी बाबाले छुट्टाउन प्रहरी चौकी पुगेको पनि समाचार आएकै हो ।
तर उनै श्रीमती हिजो आज अघोरी बाबाको साथ छैनन् । अमेरिकन ग्रिनकार्ड होल्डर ति महिला कहा छिन् त । यहि विषयमा अघोर बाबालाई सोध्दा उनले स्पष्ट जवाफ दिन चाहेनन् । अन्तर्वार्ता कै क्रम उलाई फोन आएपछि पत्रकारले अमेरिकाबाट आएको फोन हो की भनेर सोध्दा उनि भंछ्न्ब – ‘के को अमेरिका, मेरो अमेरिकामा कोहि छँदै छैन ।’
के श्रीमतीले छोडेको हो भन्दा उनले घुमाउरो जवाफ दिएका छन – ‘को आउँछ को जान्छ, मलाई मतलव छैन ।’ सुन्दरीजलस्थित एक कुटीमा बस्दै आएका उनको लाइफ ड्या’मेज थेगो एक जमाना निक्कै चर्चित भएको थियो । तर समय संगै उनको चर्चा सेलाउदै गएको छ । उनै भाइरल अघोर बाबासंग गरिएको ताजा कुराकानी हेर्नुहोस :